बलिउड Archives - Page3of 12 - Purbeli News
English बलिउड	सलमान खानको १८ बर्षे पुरानाे मुद्धा बल्झियाे : मुद्दाको फैसला आजै : ३ देखि ७ वर्षसम्म जेल हुन सक्ने	एजेन्सी । बलिउड सुपर स्टार सलमान खानको हरिण शिकारसँग जोडिएको १८ वर्ष पुरानो मुद्दाको बुधबार फैसला हुने बताइएको छ । यदि यो मुद्दामा सलमान दोषी ठहरिए ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको छ । सन १९९८ मा भएको यो शिकार सम्बन्धि मुद्दामा सलमानको विरुद्ध चार मुद्दा चलिरहेको छ । यी मध्ये दुईमा लेहाइकोर्टबाट सफाई पाइसकेका छन । अर्को एक मुद्दाको सुनुवाई भ...	बलिउडका यी ६ जोडीः जो आफ्नो पूर्व जोडीलाई देख्नै चाहँदैनन्…	मुम्बई । तपाई अब यो कुराबारे जानकार हुनुहुने छ कि कुनै सभा समारोहमा आफ्नो प्रेमिकासंग ठोकिनु कतिसम्मको समस्या झेल्नुहुन्छ ।
किनकी तपाईलाई आफ्नो प्रेमीकासंग कुनै अप्ठेरो महसुश हुँदैन । तर, यस कुरामा हामी मात्रै एक्लै छैनौं । बलिउड स्टार पनि यो समस्यासंग जु...	शाहरूखले जंगिदै भने – नारीकाे इज्जत नगरे छाेराकाे गर्दन छिनाइदिन्छु !	एजेन्सी। नयाँ वर्षमा भारतको बेङ्लुरुमा महिलाहरुसंग गरिएको दुर्व्यवहारले पुरै भारतको ध्यान खिचेको छ। यहि मुद्धामा शाहरुख खानले एक पत्रिकाको लागि हालै अन्तर्वाता दिँदै महिलाको इज्जत नगरे छोराको गर्दन काट्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘म आफ्नो दुवै छोरा आर्यन र अबरामलाई सिकाउने गर्छु कि कुनै केटीलाई हर्ट नगर्नु। यदि तिमीहरुले यस्तो गल्ती गर्यौ भने गर्...	सुटिङ गर्दागर्दै दुर्घटनामा परिन पियंका ! त्यसपछि के भयाे ?	एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आफ्नो अमेरिकी टेलिभिजन शो ‘क्वाटिको–२’को सुटिङका क्रममा दुर्घटनामा परेकी छिन् ।
एफबीआई ड्रामा सीरीज ‘क्वाटिको सीजन–२’को एउटा एक्सन दृश्य दिने सुटिङका क्रममा चिप्लिएर लडेकी थिइन् । उनको टाउँकोमा चोट लागेको बताइएको छ ।
खबरअनुसार, प्रियंकालाई तत्कालै अस्पताल पुर्याइएको छ, उनलाई उपचारका लागि केही दिनको छुट्ट...	दिपीकालार्इ अाफ्नै लुगाले धाेका दिएपछि यस्ताे भयाे …..	एजेन्सी । कहिलेकाही अाफैले लगाएकाे पहिरनले धाेका दिदा कस्ताे महसुस हुन्छ अाफै बिचार गर्न सकिन्छ । मान्छेकाे भिडमा अाब्रुक राख्ने तिनै कपडाले बलीउडकी हस्ती दिपिका पादुकाेणलार्इ पनि दिनुसम्मकाे धाेका दिएकाे छ ।
हालैमात्र हलिउड नायक भेन डिजेलसंग XXX:रिटर्न अफ जेण्डर केज’मा अभिनय गरिसकेकी बलिउड नायिका दिपीका साेही फिल्मकाे प्रिमियर साे हुदै गर्दा ...	प्रियंका चोपडाको फिल्ममा यि नेपाली कलाकार छानीए	काठमाडौं । बलिउड सुन्दरी नायिका प्रियंका चोपडाले बनाउने भनिएको नेपाली फिल्ममा कस्ता नेपाली कलाकार छानीएलान् ? भन्ने चर्चा यतिबेला उत्कर्षमा छ । प्रियंकाले बनाउने नेपाली फिल्ममा सम्पुर्ण कलाकार नेपाली भाषी हुने भएपछि कलाकारहरुले पनि आँफु छानीन पाए भन्ने चासो देखाउन थालेका छन् ।
जसमध्ये अभिनेता सुनिल थापाले प्रियंकासँग काम गर्ने पक्कापक्की भएको छ ...	भारतीय अभिनेता ओम पुरीका १० रोचक तथ्य	एजेन्सी। भारतीय अभिनेता ओम पुरीको ६६ बर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ । गत अक्टोवर १८ मा ६६ बर्ष पुगेका आम पुरीको हृदय घातका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ ।
उनले भारतीय बाहेक अन्तराष्ट्रिय स्तरका फिल्ममा पनि अभिनय गरिसकेका छन् । उल्फ, वेस्ट इज वेस्ट, गान्धी, इस्ट इज इस्ट तथा उन्यासमा आधारित फिल्म द थन्डर फूड जर्नी जस्ता हलिउडका फिल्ममा पनि ओमपुरी...	ऐश्वर्यालाई अभिषेकले यसकारण फिल्म खेलाउन चाहँदैनन्	काठमाडौं। बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय र अभिनेता अभिषेक बच्चनले विवाहअगाडि धेरै वटा फिल्ममा एकसाथ काम गरे । तर, विवाहपछि ‘रावण’ र ‘सरकार राज’ दुई वटा फिल्ममा मात्र एकसाथ काम गरे । होलै, अभिषेक बच्चनले पत्नि ऐश्वर्या रायसँग काम गर्न नचाहेको बताएका छन् । अभिषेक अभिनित फिल्म ‘हाउसफूल–३’को सफलतापछि उनले आगामी बर्ष आफ्नो होम प्रोडक्शनमा ‘लेफ्टी’ नामक ...	प्रियंका चोपडाले नेपाली भाषाको फिल्म बनाउँँदै : अधिकांश कलाकार नेपाली नै	एजेन्सी / पूर्व विश्व सुन्दरी एवं बलिउडदेखि हलिउडसम्मकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले नेपाली चलचित्र निर्माण गर्ने भएकी छिन् । उनले सिक्किमेली–नेपाली चलचित्र बनाउन लागेको जनाइएको छ । प्रियंकाको कम्पनी पर्पल पेबल प्रोडक्सनले बनाउने उक्त चलभित्रको नाम ‘पउआ’ हो ।
जसको अर्थ पाहुना हुने टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । यो चलचित्र युद्धको समयमा बाबुआमाबाट ...	यसकारण सासूसँग सधै लज्जित हुनुपरेको छ करिनालाई	नयाँ दिल्ली । मंगलबार मात्र छोराकी आमा बनेकी करिना कपुरले आफ्नी सासू शर्मिला ट्यागोरसामु एउटा कुरामा सधैं लज्जित भइरहनुपरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार सानो हुँदा करिनालाई पढाइमा कुनै रुचि थिएन । तर, सानैदेखि उनको लक्ष्य फिल्ममा काम गर्ने नै थियो । करिना अक्सर क्लास बंक गरेर आफ्नो अभिनेतृ दिदी करिश्मा कपुरलाई सेटमा भेट्न जान्थिन् ।